ZTE Axon 10 Pro 5G ga - adi ire ere n’ọkara afọ a | Gam akporosis
ZTE Axon 10 Pro 5G ga-adị maka ọrịre na ọkara nke mbụ nke afọ a
ZTE webatara ụdị 5G dị ogologo oge ọ na-eche nke Axon 10 Pro. Ekwuwapụtara ekwentị yana ụdị 4G ya, nke, na-eme, na-ere ere taa na mba Asia buru ibu.
Agbanyeghị, ZTE enyeghị ụbọchị mbupute gọọmentị maka ụdị 5G ya n'oge mmalite ya. Bụlagodi, ugbu a anyị nwere nkọwa ndị ọzọ gbasara ozugbo ọ dị n'ahịa.
Ọ bụ ezie na anyị kwuburu na ngwaọrụ ahụ ga-aga ire ere na Mee 1 gara aga, okwu ahụ apụtaghị n'ụzọ ahụ. N'oge a, ZTE gosipụtara anyị nke ahụ Axon 10 Pro 5G ga-adị na Europe na ọkara mbụ nke 2019.
Ka anyị fọrọ nke nta n'etiti afọ, a usoro iheomume atụmatụ ya tọhapụ oge n'ime ọzọ ọnwa abụọ. Mwepụta nke Europe maka ụdị 5G ya nwere ezi uche, ebe a ga-atụgharị usoro ọkọlọtọ nke ọgbọ na-esote n'ọtụtụ mba EU na 2019.
Switzerland bụ onye izizi na Europe iji mejuputa netwọkụ azụmaahịa 5G na mpaghara ahụ ọ yikarịrị ka mba ndị dịka Finland, Austra, United Kingdom, Spain na Italytali ga-esochi ya.
Cheta nke ahụ Axon 10 Pro 5G bụ ọkọlọtọ siri ike na ntinye aka nke ika iji chee ihu kpakpando nke ndi ozo.
ZTE Axon 10 Pro 5G n'elu eserese AnTuTu ekele maka nchekwa ngwa ngwa
Ekwentị nwere igwefoto azụ atọ nke nwere ihe mmetụta 48 MP (f / 1.7) isi ihe mmetụta, 20 MP (f / 2.2) oghere dị obosara na 125 Celsius FOV, na 8 MP (f / 2.4) oghere telephoto. Modul foto a na-abịa na mbugharị ngwa anya 3x, mbugharị ngwakọ 5X, na mbugharị dijitalụ 10x. Enwekwara igwefoto 20 MP n'ihu maka selfies.
N'aka nke ọzọ, na-arụ ọrụ na processor Snapdragon 855 na modem Qualcomm X50 5G ọ na-abịa na ihe ngosi ihe mkpịsị aka na-egosipụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZTE Axon 10 Pro 5G ga-adị maka ọrịre na ọkara nke mbụ nke afọ a
Wepụtara sụgharịrị nke Moto E6, ọzọ Motorola mobile nke ga-alụ ọgụ na ala nso
HTC na-aga n'ihu na-eweta ọghọm na azụmaahịa ekwentị ya